IHuawei P40 Pro - Unboxing nokuhlolwa kokuqala | Izindaba zamagajethi
IHuawei P40 Pro - Unboxing nokuhlolwa kokuqala
UMiguel Hernandez | | General, Izaziso, Izibuyekezo
Sithole enye yezethulo ezikhetheke kakhulu zeHuawei emlandweni, futhi ukuthi umzuzu wokufuna ukwazi owahlala ngenxa yobhadane lwamanje usenze sathokozela isethulo lesi sisuka emakhaya ethu. Izingxoxo nethimba leHuawei nabanye ochwepheshe abalahlekile. Noma kunjalo, njengoba inkampani yase-Asia ingafuni ukuthi ungaphuthelwa lutho kukho konke abakwethule, bakwazile ukuthola iHuawei P40 Pro entsha ezandleni zethu ngemuva kwemizuzu embalwa yethulwe. Zitholele nathi ukungaphendulwa kokuphela kokuphela okusha okusha kweHuawei, iP40 Pro, ngazo zonke izici zayo nokuthi yini okufanele uyazi ngezindaba zayo.
Okokuqala sifuna ukukusho lokho senza lokhu kubuyekeza futhi ngokubambisana nabangane be-Androidsis, ngakho-ke, sizobona i-unboxing kanye nokuvela kokuqala lapha ku-Actualidad Gadget, kepha ngesonto elizayo uzokwazi ukujabulela ukubuyekezwa okugcwele ngokuhlolwa kwekhamera nokusebenza ku-Androidsis, kuwebhusayithi yayo nasesiteshini sayo se-YouTube. Futhi ngaphandle kokuchitha isikhathi, asihambe nemininingwane yale Huawei P40 Pro.
1 Izici zobuchwepheshe
2 Amakhamera: Indawo Yokuguqula
3 I-Multimedia namanye amakhono
4 Umehluko phakathi kwamamodeli ahlukahlukene
Njengoba ukwazi ukubona, le P40 Pro entsha ayiswele lutho, ezingeni lobuchwepheshe lamandla ivelele iprosesa yayo yeKirin 990 evela enkampanini yase-Asia uqobo ihambisana ne-8GB ye-RAM kanye neyunithi lokucubungula ihluzo laseMali G76.
I-Modelo I-P40 Pro
Umseshi I-Kirin 990
Isikrini 6.58 intshi OLED - 2640 x 1200 FullHD + ku-90Hz
Ikhamera yesithombe esemuva I-50MP RYYB + Angle Wide Angle 40MP + 8MP 5x Telephoto + 3D ToF
Ikhamera yangaphambili I-32 MP + IR
Isitoreji I-256 GB iyanwetshwa ngekhadi lobunikazi
Isifundi sezigxivizo zeminwe Yebo - Esikrinini
Ibhetri I-4.200 mAh enekhokhiso esheshayo engu-40W i-USB-C - Ishaja ye-Qi ebuyela emuva engu-15W
Isistimu yokusebenza I-Android 10 - EMUI 10.1
Ukuxhumana nabanye I-WiFi 6 - BT 5.0 - 5G - NFC - GPS
Isisindo I-203 amagremu
Ubukhulu X x 58.2 72.6 8.95 mm
Intengo 999 €
Ngokombono wezobuchwepheshe Kumele futhi sigqamise iqiniso lokuthi sinobuchwepheshe bezokuxhumana ze5G, Futhi ukuthi kulesi sici uHuawei uyiphayona, enye yamafemu esebenzisa lolu hlobo lokuxhuma emhlabeni wonke. Njengoba bekulindelwe, futhi sinesixhumi sakamuva se-WiFi 6, iBluetooth 5.0 neNFC ukuze sikwazi ukukhokha ngedivayisi noma ukuyivumelanisa.
Amakhamera: Indawo Yokuguqula
Sinemodyuli enezinzwa ezine evelele kakhulu eyenza umehluko ezingeni lokuklama, lokhu kuphinde futhi kwathanda ukunambitheka komthengi. Ngokwami ​​ngijabule ngokuhlelwa kwekhamera kwangaphambilini okungafakwanga izinzwa ezimbalwa, kodwa ngiyaqonda ukuthi kuyadingeka ukuvuselela ngezikhathi ezithile kulesi sici ukuze kuhlukaniswe amamodeli amasha kulawo "amadala". Imiphumela yokuqala esiyitholile ibe mihle njengoba ubona ezivivinyweni esizishiya ngezansi ukuvula umlomo wakho kancane.
Inzwa ye-50MP f / 1.9 RYYB
I-40MP f / 1.8 engela ebanzi ye-Ultra
I-8MP telephoto ene-5x zoom
Inzwa ye-3D ToF
Ngendlela efanayo siqopha ividiyo ngokuzinza okumangazayo kanye noguquko oluhle phakathi kwamakhamera, futhi lokho kuyikho I-EMUI 10.1 yenza uhlelo lokusebenza lwekhamera lube yinto enhle kakhulu eshiye ukunambitheka okuhle emilonyeni yethu kulezi zivivinyo zokuqala futhi siqinisekile ukuthi izosinika imiphumela emihle kakhulu ezivivinyweni zokugcina. Sithola ukucutshungulwa kokutholwa ezithombeni, umehluko omncane phakathi kwesibhamu esisithathayo nomphumela wokugcina, futhi asazi nhlobo ukuthi lokhu kuhle noma kubi, ikakhulukazi nge-Artificial Intelligence.
I-Multimedia namanye amakhono
Siqala ngesikrini sayo esimangalisayo cishe sama-intshi ayi-6,6 OLED ngabo bonke ubuchwepheshe be-HDR ongabucabanga nokuthi njengoba kuhlale njalo kulo mkhiqizo unikeza ukulungiswa kombala okuhle. Singafinyelela ukulungiswa I-FullHD + enezinga lokuvuselela i-90Hz Futhi empeleni kungenye yezinto ezingimangaze kakhulu, isikrini sihle kakhulu futhi nokusetshenziswa kwevidiyo kufana nesipiliyoni lapho uthatha izithombe. Eqinisweni, bengingasho ukuthi isikrini singesinye sezici engisithande kakhulu ngale Huawei P40 Pro.
Ibhethri lale Huawei P40 Pro yi-4.200 mAh futhi kusobala ukuthi asikakwazi ukukuhlola, yize imizwa imihle koxhumana nabo bokuqala. Inikeza ukukhokhiswa okusheshayo kwe-40W okuhambisana nokushaja okungenantambo okungaguquguquki okufika ku-27W, okuwumsangano wangempela, empeleni kuzokuba nzima ukuthola ishaja engenantambo enokuhambisana kwe-Qi okukhipha amandla amakhulu. Vele, yize ibhethri lingelikhulu kangako, iHuawei inokuhlangenwe nakho okuqinisekisiwe uma kuziwa ekugcineni impilo yayo.
Umehluko phakathi kwamamodeli ahlukahlukene
Umehluko omkhulu usekhamera, ngamunye uzoba nenzwa eyodwa, kusuka ku-3 ku-P40 kuya ku-5 ku-P40 Pro +. Kumele kuqashelwe ukuthi iP40 Pro + izokwakhiwa nge-ceramic futhi izoba nemibala emibili eyisisekelo, emhlophe nomnyama, ekhethekile, kanye nokuthi ine-12GB ye-RAM eyi-4GB ngaphezu kwamamodeli wangaphambilini okukhulunyiwe. Sizokwazisa futhi sizokulethela isibuyekezo kungekudala.
Okungafanele sihluleke ukukusho yilokho esinakho ukuthi kungenzeka sikhethe phakathi kwemibala emine: Okumpunga, Ukuphefumula Okumhlophe, Okumnyama neGolide ngaphezu kwesiphetho se-ceramic esizosebenza kuphela kumodeli ephezulu kakhulu, iHuawei P40 Pro + esithemba ukuyivivinya ngokuhamba kwesikhathi.
Njengoba sishilo, siyethemba ukuthi ividiyo ehola le unboxing enezimpawu zokuqala izokujabulisa futhi sikukhumbuza ukuthi ngesonto elizayo uzokwazi ukubona isibuyekezo esigcwele ngesonto elizayo esiteshini se-Androidsis YouTube nakuwebhusayithi yayo, www.androidsis.com lapho kukhona ama-totorales amaningi nokubuyekezwa mayelana nemikhiqizo ye-Android etholakala emakethe, uzoyikhumbula?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » IHuawei P40 Pro - Unboxing nokuhlolwa kokuqala
Ngaphezu kwe-P40, uHuawei ubuye wethula iWatch GT 2e, umsizi uCelia, iHuawei Video nokunye.
Amadili weTronsmart wesikhumbuzo se-10th se-Aliexpress